Warshad Istaagga TV-ga - Soo-saareyaasha TV-ga Shiinaha, Soo-saareyaasha
JF-H-906 Shaxda Qaxwaha Smart Wareegta + Taleefishinka oo ay la socdaan Khaanadaha Wareegsan ee Caddaan & geedkii
Sii booskaaga kor u qaadista qaabka casriga ah iyo quruxda leh miiskan kafeega ah ee 2.
Naqshad caan ah oo leh taabasho rafcaan casri ah, istaaggan TV-ga ee dheeraadka ah iyo miiska kafeega ayaa noqon doona xulasho la yaab leh qolkaaga madadaalada
JF-H-903 miis badan oo cofee + miis quus ah
Naqshad caan ah oo leh taabasho rafcaan casri ah, istaaggan gaarka ah ee TV-ga la dheereyn karo wuxuu noqon doonaa xulasho la yaab leh qolkaaga madadaalada. Soo bandhigida nashqadda la dheereyn karo ee waxqabadka leh, waad isku hagaajin kartaa dhererkeeda iyadoo loo eegayo baahiyahaaga iyo qaybta la dheereeyey waxay ku siineysaa meel lagu daro bandhigga buugaagtaada, sawirka qoyska, qurxinta, iyo inbadan.
YF-H-901 TV Istaag 3-Khaanad Media Istaag oo leh Qaab Dahab ah & Muraayad Dabacsan oo Sareysa
Haddii aad raadineyso gabal muuqaal ah oo runtii jazz ka dhigaya meesha aad ku nooshahay markaa kani waa kan! Waa mid aad u quruxsan oo casri ah, waa hubaal inay ka dhaceyso marxaladda qolkaaga fadhiga. Caddaan cusub ayaa ku habboon abuurista jawi deggan. Midabada dhammaantood waxay ka tarjumayaan si qurux badan cutubyada 'dhammaystiran oo jilicsan sidoo kale.
YF-H-907 noocyo maqaar maqaar ah
Qaabka joomatari ahaan wuxuu la kulmayaa miiska miiska oo siman, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon reerka casriga ah.
YF-H-905 TV wuxuu taagan yahay Khaanadaha & Albaabbada Dahabka ku jira
Haddii aad dhawaan u soo guurtay guri cusub ama aad go'aansatay inaad dib u qurxiso oo aad u baahato istaag TV cusub si aad u raacdo qolkaaga, waxaa jira tobannaan ikhtiyaarro ah.
JF-H-904 Miiska Qaxwaha Caddaan Leh oo Cadaan ah + Istaag TV
Raaxo Casri ah: Naqshad jilicsan oo leh dahab dhalaalaya oo dhalaalaya waxay ku dareysaa taabasho dhalaalaya meel kasta, oo ku habboon isticmaalka iyada oo lagu soo koobayo muuqaal casri ah. Miiska qaxwada wuxuu ku dari doonaa muuqaal dhalaalaya oo casri ah qol kasta oo guriga ku yaal oo jilicsan, dhalaal dhalaalaya oo dhalaalaya
YF-H-900 nooc raaxo TV dahab ah
Istaag qalabka warbaahinta ee muraayadda leh ee Dahabka Casriga ah ee leh 6-Drawer & Glass Top oo laga sameeyay MDF, muraayad qabow iyo bir bir ah si loo hubiyo in la isticmaalo muddo dheer.
YF-H-700 dhalaalaya dhalaalaya iyo istaandarka tv-ga ee nadiifka ah
Qeybta casriga ee TV-ga oo leh muraayado sare oo cad oo MDF ah
Istaraatijiyad Fiican oo bixisa qalab kaydinta karti sare leh oo la jaan qaadi kara shaashaddaada isla markaana ku habboon qol kasta.